Data yesayenzi ibasa rinopisa sarudzo izvozvi. Maererano neUS Bureau yeLabour Statistics, basa revanoongorora nhamba uye vanoongorora data rinotarisirwa kukura 30% panosvika 2024. Izvi zvinodaro nekuti mabhizinesi emhando dzese ari kuunganidza huwandu hukuru hwe data, uye vanoda vanhu vanovabatsira kuti vanzwisise zvese. Chikonzero nei data science chiri kuita chinhu chikuru chinotevera nekuda kwehuwandu hwe data yatinayo nhasi. Isu tinorarama munyika yatiri kugadzira 2.5 quintillion bytes yedata zuva rega rega. Data Science hunyanzvi hwakakosha kumakambani ese. Inovandudza mashandiro uye inopa ruzivo mubhizinesi rako. With Data Science, unogona kuita zvisarudzo zvichibva pachokwadi pane kungofungidzira. Tndiye chinhu chinonyanya kukosha data science ndeyekuti inobatsira mabhizinesi kuita sarudzo dziri nani. Kana ukashanda mu data science, unogona kubatsira kambani yako kuwana ruzivo rwemaitiro evatengi vavo, uye shandisa ruzivo urwu kugadzirisa zvirinani zvigadzirwa nemasevhisi avo.
Machine pakudzidza nhasi haina kumbobvira yamboita sezvainge zvakaita munguva yakapfuura, nekuda kweiyo nyowani komputa matekinoroji. Sezvo mamodheru aratidzwa kune data nyowani, iyo iterative chimiro che machine learning yakakosha sezvo ivo vachigona kuchinjira vakazvimiririra. Ivo vanogadzira zvinodzokororwa, zvakavimbika mhedzisiro uye sarudzo nekudzidza kubva kumakomputa apfuura akapihwa kwavari. Machine pakudzidza akaberekwa nepfungwa yekuti makomputa anokwanisa kudzidza asina kunyatso gadzirirwa chero basa chairo kuti rishande, ndiko kuziva maitiro uye vaongorori vari kuronga nzira dzekuona kana makomputa aigona kudzidza kubva kudhata kuburikidza chakagadzirwa njere. Vanhu vakamutsidzira kufarira machine learning sezvakangoita Bayesian ongororo uye date kuchera kune zvishoma zvinhu senge inokwanisika kuchengetedza data, yakasimba uye yakachipa computational kugadzirisa uye kukura mhando uye mavhoriyamu e data iripo. Zvose izvi zvinhu zvakaita kuti zvikwanisike kuti zvive nyore uye nekukurumidza kuvaka mamodheru anogona kuongorora data yakaoma uye yakakura uye kuunza mhinduro dzakarurama uye dzinokurumidza pamwero mukuru kana zvichidiwa. Nekugadzira mamodheru chaiwo, mabhizinesi nemasangano vane mukana wakanaka wekuona mikana inobatsira uye yakabudirira uye kuderedza njodzi nekudaro kugadzira. machine learning chinhu chakakosha mumaindasitiri epakati. Iyo yapfuura ndeyezvino uye yazvino inguva yemberi. Data ndiyo mari itsva. Iyo yakawanda data iwe yaunogona kupa pamusoro pevateereri vako vavanovavarira, zvakanyanya mukana wekuti ukwanise kuvakwezva. Semuenzaniso, unogona kushandisa data kuratidza kuti vangani vanhu vari kushanyira webhusaiti yako, vangani vanhu vari kudzvanya pane ako ads, uye vangani vanhu vari kudzvanya kusvika kune yako saiti. Data Science chidzidzo chekutora ruzivo kubva kune data. Iyo chirango musanganiswa wesainzi yekombuta, nhamba, uye masvomhu. Iyo inzvimbo yakafara kwazvo, uye ine akawanda maapplication.
Data Science inzvimbo iri kukura, uye inogona kusanganisira mabasa akasiyana-siyana. Kutanga, iwe une data sainzi wekare, aive nyanzvi yemasvomhu kana manhamba. Zvadaro, iwe une data sainzi wezvino, ari mumwe munhu anonzwisisa bhizinesi uye anogona kubatsira kuita sarudzo dzinofambiswa nedata. Data ndiyo mafuta matsva. Zvese zvatinoita, kubva pamatorero atinoita kubva kuA kuenda kuB kusvika pakuzvivaraidza kwatinoita kusvika pakuwana kwatinoita nhau dzichangoburwa, zvakavakirwa pahwaro hwedata. Asi data science haisi nyaya yekuunganidza nekuongororwa kwedata chete. Gaurav Munjal, sainzi wedata ane MBA kubva kuHarvard Business School, "Makambani ari kunyanya kufambiswa nedata ndiwo anogona kubudirira, uye makambani anonyanya kufambiswa nedata ndeaya anonyanya kufambiswa nedata kubva kutanga kwazvo. A data science nyanzvi musayendisiti anotarisa pane data. Data yesayenzi inzvimbo inokurumidza uye inogara ichichinja, uye ramangwana rinotonyanya kunakidza. Sezvo maindasitiri mazhinji achimuka kune kugona kwedata, tichaona akawanda matsva uye anonakidza maapplication e. data science. Kugona kunzwisisa data kuri kuita 'mutauro' mutsva isu tese tinoda kudzidza. Data yesayenzi ndiyo mharadzano yezviverengero, sainzi yekombuta, uye masvomhu, uye inzvimbo iri kukura mukati meiyo tech indasitiri.
Nyika yese iri kuenda kudhijitari, uye tekinoroji nyowani, kubva evanhu vezvenhau kune zvinopfekeka kune Internet Zvinhu, inogadzira huwandu hukuru hwe data. Sainzi inzvimbo iri kukura, uye inogona kusanganisira mabasa akasiyana-siyana. Kutanga, une data sainzi wekare, aive nyanzvi yemasvomhu kana manhamba. The data science nzvimbo iri kuramba ichiwanda. Kune makambani akaita seLocker, Mode, uye Domino Data Lab ari kupa data science sebasa. Kune zvekare vatengesi veBI vatengesi vakaita seBMM neOracle vari kutanga kupa data science sebasa. undefined Data yesayenzi ndiyo sainzi yekuburitsa ruzivo uye nzwisiso kubva kune data. Icho chirango chitsva. Zviri pamusoro pekuwana ruzivo kubva kune data pane kushandura data. Data yesayenzi inogona kushandiswa kune akawanda akasiyana maapplication kubva pakuona mapatani mune data kusvika pakurumbidza zvigadzirwa zvinoenderana nekutenga. Chimwe chezvinhu zvichachinja mukati data science indasitiri ndeyekuti sainzi yedata inozova yakawanda yeinjiniya, yakawanda yemaneja wechigadzirwa, yakawanda yemunhu wekushambadzira, uye yakawanda yemunhu webhizinesi. Data Science chinhu chitsva mukushambadzira uye bhizinesi nyika, asi kukosha kwayo kuri kukura chete. Data Science musanganiswa wenhamba, sainzi yekombuta, uye masvomhu kuongorora data. Data Science inogona kushandiswa kuongorora data yapfuura kufanotaura mafambiro uye data remangwana